I-NANNING TAGRM CO., LTD ziyilo lobungcali kunye nomenzi woomatshini bomgquba, owandulelayo wasekwa ngo-1997. I-TAGRM izibophelele kuphando nophuhliso lwezinto zomgquba eziqhutywa nguwe kule minyaka ingama-20 idlulileyo. Sifumene amalungelo awodwa omenzi wechiza awenziwe ama-3 kunye nenani leemveliso ezisetyenziswayo. Iimveliso zifumana isatifikethi se-CE, kwaye inkampani ipasise i-ISO9001: 2015 yokuqinisekiswa kwenkqubo.
Senza uyilo lweemveliso ezizenzele wena, iinkonzo zobugcisa ezenziwe ngokwezifiso, ukubonelela ngeenkonzo zobuchule ngakumbi kubathengi.
Iichungechunge zokujika komgquba ezizisebenzelayo ngoomatshini abakhethekileyo bokwenza umgquba emhlabeni. Zisetyenziselwa ukuxuba, ukucola kunye nokwandisa ioksijini yezixhobo ezikwimfumba, ukongeza, xa iicompost turners zixhotyiswe ngesixhobo sokutshiza ibhaktiriya, zinokutshiza ibacteria.
Ukujika komgquba zizixhobo ezifanelekileyo zokuguqula inkunkuma yezolimo, ilindle lezilwanyana, kunye nenkunkuma yebhayoloji yendalo iye kumgangatho ophezulu wesichumiso se-microbial organic ngokusebenzisa itekhnoloji yale mihla.
Ngomsebenzi ogqwesileyo, iindleko ezifanelekileyo kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa, i-TAGRM yokuguqula umgquba ithunyelwe e-Brazil, Mexico, Ecuador, Australia, Malaysia, Indonesia, Thailand, Nigeria, Ghana, Zambia, Congo, Tanzania, Russia, Spain, Argentina, IBulgaria, iRiphabhlikhi yaseCzech, iUruguay, iNew Zealand, iParaguay, uMzantsi Korea, iVietnam, iCambodia, iKenya, iKazakhstan, iKuwait, iSaudi Arabia, iNamibia namanye amazwe nakwimimandla engaphezu kwama-80. Siza kuqhubeka nokubonelela ngobuchule, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo kumzi-mveliso wezichumiso eziphilayo eziphilayo.
Ukugxila kumatshini womgquba, ukomeleza umsebenzi wobhere, ngolawulo olugqibeleleyo, indlela yolawulo lokuvelisa izinto ezintsha, ukuhlakulela itekhnoloji engundoqo yokuguqula umgquba kunye nokukhuthaza ukukhula kweshishini lomgquba, ukukhuthaza ngokubanzi inguqu kunye nokuphuculwa, ngophuhliso oluphezulu!
I-TAGRM ijolise ekukhuseleni inkqubo yendalo yomhlaba. Ngokunceda & ukukhuthaza abantu kwihlabathi liphela ukuba bayisebenzise kakuhle inkunkuma yethu, njengenkunkuma eqinileyo kamasipala, iswill kunye nenkunkuma yokutya, ilindle lezilwanyana, njl., I-TAGRM izama konke okusemandleni ukukhusela umhlaba.
Ngale njongo, sandisile imarike yethu rhoqo kukhuphiswano noogxa basekhaya nabangaphandle, kwaye sigcine isikhundla esiphambili kwicandelo lomenzi we-compost Turner kunye nomenzi womatshini wezolimo e-China.
Sisoloko sigcina uyilo kunye nolwenziwo "olwenziwe lula, olusebenzayo nolomeleleyo", kunye nokubonelela abathengi ngeemveliso ezenziwe ngokwezifiso kunye nezicwangciso zemveliso zobungcali.
Isiseko sokwenza inkampani sigubungela indawo ye-13000 yeemitha zesikwere, kunye nomatshini wokusika weplasma we-CNC, umatshini wokusika ipleyiti, iziko lokuqhubekeka ngekhompyuter, i-CNC lathe, umatshini wokugaya kunye nezinye izixhobo.
Cofa apha ngolwazi oluthe kratya malunga negama le-TAGRM